Instagram Marketing: လူမှုကွန်ယက်များသို့မည်သို့မြှင့်တင်ရမည်နည်း➡️➡️နောက်လိုက်များ▷➡️
Instagram ကိုစျေးကွက်: ဘယ်လိုလူမှုရေးကွန်ရက်များမြှင့်တင်ရန်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 19, 20180မှတ်ချက်များ 1302
လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်များအတွက်ပလက်ဖောင်းအဖြစ် Instagram ကိုစူးစမ်းခြင်း။
သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကို Instagram ပေါ်တွင်တိုးမြှင့်ရန်၊ သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်သင်၏နောက်လိုက်များအားမှန်မှန်နှင့်တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်အကြောင်းလူသိများလေ၊ သင်ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်ထံရောက်ရှိရန်သင့်အခွင့်အရေးများပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။ သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုပိုမိုလူကြိုက်များစေရန် Instagram ကိုလူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ်မည်သို့စူးစမ်းမည်ဆိုသည့်အချက်များနှင့်နည်းစနစ်များကိုလေ့လာကြပါစို့။ သို့သော်သေချာသည်မှာအမြန်ဆုံးနည်းပရိယာယ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် Instagram ကိုအပေါ်နောက်လိုက်ဝယ်ဖို့.
1 ။ တစ်ဦး, ထူးခြားတဲ့လတ်ဆတ်နှင့်ဆွဲဆောင်မှု hashtag ကိုသုံးပါ။
hashtags တွစ်တာအဘို့မသာအရေးကြီးလှသည်; သူတို့ကအစ Instagram ကိုအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်။ ဒါဟာအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းရှာဖွေမှုများကို Instagram ကိုကနေတဆင့်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်မည်သို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ။ တွစ်တာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သင်ဒီမှာဇာတ်ကောင်များ၏အရေအတွက်အားဖြင့်ကန့်သတ်မရပါတယ်။ သငျသညျကို log in ရန်သင့်စာပမြေားတှငျအခြို့သောတံဆိပ်များပါဝင်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်များအတွက် hashtag ဆုံးဖြတ်ခြင်းမှာ, တိကျတဲ့ hashtags ကိုအမှတ်တံဆိပ်ကိုဖန်တီးရန်အကြံပြုလိုတယ်။ တတ်နိုင်သမျှထူးခြားတဲ့နှင့်အေးမြကစောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားပါ။ အဆိုပါရှာဖွေမှုများကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန် hashtags ကို, hashtag နှင့်သီးခြားအမှတ်တံဆိပ်၏အတော်ကြာမျိုးကွဲ, ယေဘုယျ hashtags ကိုနှင့်ယိ hashtags ကိုကြိုးစားပါ။
တိကျတဲ့အမှတ်တံဆိပ် hashtags ကိုဥပမာများဖြစ်ကြသည်:
တစ်ဦးကယေဘုယျ hashtag စံပြဥပမာသိသိသာသာဖြစ်မယ့်စကားလုံးအပေါ်စကားလုံးနှစ်လုံးနှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အဲဒီအစား #QL ၏, #AskQL ပိုကောင်းတဲ့ hashtag ဖြစ်ပါတယ်။
2 ။ အဆက်မပြတ်သင့်ရဲ့နောက်လိုက်တွေနဲ့အပြန်အလှန်။
သငျသညျသဘာဝကျကျသို့မဟုတ် Instagram ကိုအပေါ်နောက်လိုက်များဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ, သင်နောက်လိုက်ရပြီးတာနဲ့, စေ့စပ်နေဖို့ထိတ်လန့်ကြပါဘူး။ အဆက်မပြတ်သူ၏နောက်လိုက်သက်ဆိုင်ရာတွေ့ရသောအထင်ကြီးအကြောင်းအရာထုတ်ဝေရန် သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားနှင့် စာချုပ်။ ကျပန်းပို့စ်များကိုရှောင်ရန်၊ တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်ဆယ်ကြိမ်ဖြစ်နိုင်သမျှဝေးဝေးရှောင်ပါ။ အနည်းဆုံးတစ်ရက်လျှင်နှစ်ကြိမ်တင်ပို့ခြင်းသည်လိုအပ်သည်။ သင်၏နောက်လိုက်များကြီးထွားလာသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်သည်တစ်နေ့လျှင်သုံးလေးကြိမ်တိုင်စတင်ရေးသားနိုင်သည်။ ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုသည်အရေးအပါဆုံးဖြစ်သည်။ အန်တိုနီကာဘွန်း (Anthony Carbone) ၏အဆိုအရ“ အကယ်၍ သင်သည်နယ်ပယ်တစ်ခုတွင်နေပြီးသင်၏ရေးသားချက်များတွင်စစ်မှန်မှုနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုပြပါကကြီးမားသောနောက်ဆက်တွဲတစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ”
ပိုကလူထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်သည် dynamically သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာကို (ပုံ / ဗီဒီယို) အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်စည်းရုံး, သင်တို့အဘို့ပိုကောင်းနိုင်ပါတယ်။ ထိုအချိန်မှစ. သူအဖြစ်ကောင်းစွာအထောက်အကူဖြစ်စေသို့မဟုတ်ယင်း၏အကြောင်းအရာအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်ချင်သူကိုတခြားသူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကို inculcate ။
3 ။ သတင်းအချက်အလက် Overload နှင့်သင်၏ပရိသတ်ကိုယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏မပြုပါ
ခြော, ကွက်တိဝင်မလွှဲမရှောင်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အကြောင်းအရာ၏သဟဇာတဖြစ်မှုနှင့်ဆီလျော်မှုကင်းမဲ့လျှင် spam များကိုသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက် Overload ထုတ်ပေးသည်။ သင့်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့နှင့်ကိုက်ညီအကြိမ်ရေထားပါ။ အဲဒီအစားသူတို့ကိုတရားကိုဟော၏, သူတို့ကိုကျူးလွန်။ တခါတရံသူကမေးမြန်းဖို့ သာ. ကောင်း၏, တန်ဖိုးထားခံရခံစားရသင့်တယ်။ သူတို့ထဲကသိသိသာသာအပြန်အလှန် Excavates ။ အသုံးပြုမှု သေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဓာတ်ပုံ applications များ.
4 ။ ကိရိယာ၏အများဆုံးအခမဲ့လုပ်ပါ။
Instagram ကိုလည်းဆန်းစစ်အခမဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း profile များကိုအဘို့အရေးကိရိယာများကိုထောက်ပံ့ပေး; အမြော်အမြင်ရှိရှိ, သင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုစျေးကွက်မှအကောင်းဆုံးသူတို့ကိုအသုံးပြုပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, "ထိုးထွင်းသိမြင်မှု" တစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ tool ကို, ဒေတာအပေးအယူမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေး။ သင့်အကောင့်ပိုင်းတွင်သင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်ဆိုပါကတစ်ဦးသို့ပြောင်းရန် ကုမ္ပဏီ။ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်၏ပုံသဏ္Instagramာန်ကို Instagram ပေါ်တွင်ခြေရာခံရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအသုံးပြုသောအခမဲ့ကိရိယာများကိုသင်မည်သို့ရယူနိုင်သည်ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။ 'ထိုးထွင်းသိမြင်မှု' သည်သင်၏ပရိသတ်ကိုနားလည်ရန်ကူညီပေးပြီး၊ အထင်ရှားဆုံး၊ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်လုပ်ရပ်များအတွက်ရေးသားချက်များနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုသင့်အားပေးသည်။ နောက်ဆုံးတွင်မည်သည့်ရေးသားချက်များသည်ထိရောက်မှုရှိပြီးမည်သူကသင်၏ပရိသတ်နှင့်အဆင်မပြေကြောင်းကောက်ချက်ချလိမ့်မည်။
5 ။ ဆက်စပ်သည်အခြားသတင်းရင်းမြစ်များမှ Reusing အကြောင်းအရာ
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့ထိရောက်သောနှင့်အောင်မြင်သော Instagram ကိုစျေးကွက်ကသင်၏ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောတသမတ်တည်းစာပမြေားလိုအပ်သည်။ ဒါဟာသူတို့ဖန်တီးမှုနှင့်ဆွဲဆောင်မှုမြေားကိုပေါ်ထွန်းအခါတိုင်းကပုံရသည်သကဲ့သို့လွယ်ကူသည်မဟုတ်ကြောင်းသိသာသည်။ အကြောင်းအရာသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာ Curation ၏ပြန်သုံးတဲ့ကူညီပေးနေလက်ကမ်းလှမ်းဘယ်မှာကြောင်းပါပဲ။ မူရင်းပိုစတာတစ်တံဆိပ်ပေးအပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖော်ပြထားခြင်းအားဖြင့်, ဒီဟာလုံးဝကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလေ့အကျင့်သည်နှင့် plagiarism ၏မှောင်မိုက်မိုဃ်းတိမ်ကိုစီးအောက်မှာလဲကြပါဘူး။ သင်ကသင် redirect ကြောင်းမက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်ကုသသင့်ရဲ့နောက်လိုက်ဖို့သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းသေချာရပေမည်။
Instagram ကိုမှတဆင့်လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလွန်လွယ်ကူစွာသင့်ရဲ့တိကျတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရေးလွယ်ကူချောမွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်သင့်လျော်စွာ Instagram ကိုအသုံးပြုပါနှင့်ကြီးထွားလာ!
ပိုကောင်းသငျသညျလက်ပေါ်မှာရှိသင့်သောဤအဓိက5မှတပါး, Instagram ကို၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုစျေးကွက်မှအခြားအကြံပေးချက်များနှင့်နည်းဗျူဟာရှိပါတယ်။
1 လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်များအတွက်ပလက်ဖောင်းအဖြစ် Instagram ကိုစူးစမ်းခြင်း။
1.1 1 ။ တစ်ဦး, ထူးခြားတဲ့လတ်ဆတ်နှင့်ဆွဲဆောင်မှု hashtag ကိုသုံးပါ။
1.22။ အဆက်မပြတ်သင့်ရဲ့နောက်လိုက်တွေနဲ့အပြန်အလှန်။
1.33။ သတင်းအချက်အလက် Overload နှင့်သင်၏ပရိသတ်ကိုယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏မပြုပါ
1.44။ ကိရိယာ၏အများဆုံးအခမဲ့လုပ်ပါ။
1.55။ ဆက်စပ်သည်အခြားသတင်းရင်းမြစ်များမှ Reusing အကြောင်းအရာ
Instagram ကိုကနေဓါတ်ပုံကို download လုပ်လုပ်နည်း